Semalt Expert Anotsanangura Maitiro Akukanda A Website Nemahope Akanaka
Kune deta yakawandisa inowanzo kune rumwe rutivi rwe HTML. Kumashini yemakombiyuta, pepa rebhundaneti inongova musanganiswa wezviratidzo, zvinyorwa zvinyorwa, uye white space. Chinhu chaiyo chatinoenda kuti tive pane peji rewebhu chinongogumirira nenzira inogona kuverengwa kwatiri. Ikombiyuta inotsanangura zvinhu izvi se HTML tags. Chimwe chinhu chinosiyanisa code yakasvibiswa kubva kune data yatinoona ipurogiramu, mune iyi, mapurisa edu - chat para site wordpress. Mamwe mawebsite akaita se scrapers angashandisa pfungwa iyi kuti aparadze webhusaiti yehutori uye echengetedze kuti inoshandiswa gare gare.
Mutauro wakajeka, kana iwe ukazarura dhidhi ye HTML kana faira rekutsvaga peji yewebhu, zvingaita kuti uwane zvinyorwa zvinowanika pane imwe nzvimbo yewebhu. Iyi ruzivo rwaizova pane imwe nzvimbo yakadzika pamwe chete nenhamba yakawanda. Zvose izvi zvinosanganisira kubata nehuwandu nenzira isina kugadziriswa. Zvisinei, zvinokwanisika kukwanisa kuronga ruzivo urwu nenzira yakarongeka uye kugadzirisa zvikamu zvinobatsira kubva mumutsetse wose.